30-Saacadood Xeerka 114 Tababar - Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
Dhexdhexaadinta madaniga ahi waxay diiradda saartaa xirfadaha xallinta isku dhaca, farshaxanka dhexdhexaadinta, dhegaysi loo dhan yahay oo milicsiga, gorgortanka iyo sida dhexdhexaadinta bulshadu u tahay shaqada caddaaladda bulshada. Ku kasbashada xirfadaha xallinta khilaafaadka tababarkan tooska ah (iyadoo la adeegsanayo Zoom) ka dibna iskaa wax u qabso barnaamijka xallinta khilaafaadka maxalliga ah dhexdhexaadiye ahaan.
Dhammaan kuwa danaynaya inay noqdaan dhexdhexaadiye rayid ah waa lagu soo dhawaynayaa inay ka soo qaybgalaan dhexdhexaadinta bulshada Minnesota ee khadka tooska ah ee 30ka saacadood ee dhexdhexaadinta xirfadaha. Imaanshaha dhammaan 30 saacadood ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha dhexdhexaadinta madaniga ah ee Minnesota Rule 114. Kuwa dhammeeya koorsadan waxay codsan karaan inay noqdaan dhexdhexaadin u qalma Minnesota oo ku jira Liiska Dhexdhexaadinta Madaniga ah ee Maxkamadda Sare. CLE Credits waa la dabaqi karaa.
Taariikhaha tababarka: Juun 2 (Khamiis), 6 (Isniin), 8 (Arbaca), 14 (Talaado), 16 (Khamiis), 20, (Isniin), 22 (Arbaco). Waqtiga: 9 subaxnimo - 1 galabnimo CST Goobta: ZOOM
Qiimaha tababbarka dhexdhexaadinta madaniga ah ee loogu talagalay kuwa doonaya in ay iskaa wax u qabso ugu noqdaan Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka Bulshada (CDRP) waa $150 (Scholarships ayaa diyaar ah) Haddii aad rabto inaad hesho deeq waxbarasho, la xiriir CDRP-ga aad tabaruca u tahay ama cidda aad qorsheyneyso inaad la shaqeyso iskaa wax u qabso.
Haddii aadan qorsheyneynin inaad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqeyso Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka Bulshada (CDRP) kharashka tababarku waa $700; Dhibcaha CLE ayaa la dalbaday.
Tababarkan waxaa maalgalisay Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota.
Ikhtiyaarada Ala Cart ee La Heli karo: Tigidhada waxay furmi doonaan Abriil 8 10ka subaxnimo CST
Si aad isu diiwaan geliso, booqo:
Tababarka Dhexdhexaadinta Madaniga ah 30-Saacadood
Tababarka Dhexdhexaadinta Rayidka Ala Cart